Shirki maamul goboleedyada iyo dowlada dhexe oo maanta gaaray heerki ugu xumaay (Waa maxay sababta?). – XAMAR POST
Shirki maamul goboleedyada iyo dowlada dhexe oo maanta gaaray heerki ugu xumaay (Waa maxay sababta?).
By Mohamed Abdi Last updated Apr 3, 2021
Xog dhinacyo kala duwan leh oo aan ka helay shirkii maanta ayaa sheegaya in la isku mari waayay, iyada oo sida ay ii sheegèen ilo wareedyo dhanka maamul goboleedyada qaarkood uu Madaxwayne Farmaajo diiday in laga hadlo wax ka baxdan shirkii 17 kii September, 2020 iyo 16 kii February, 2021.
Maalinta Axadda ah oo ku beegan 04/04/2021 ayay mar kale isugu tagayaan teendhada Afisyooni.
Mar aan maanta booqday goobo aan sidaas uga fogayn teendhada waxaa ay indhahaygu qabanayeen dabaabaadka ciidamada Amisom oo ku xayndaaban, laga bilaabo Airport ka Aadan Cadde ilaa Teendhada afisyooni meel ka baxsan.
Rajo intee le’eg ayaad ka qabtaa in Soomaalidu dhexdeeda ka heshiiso, iyaga oo u tanasulaya danta iyo maslaxadda umadda.
7 Qof Oo udhintay markii la duray Talaalka Oxford-AstraZeneca
Madaxweyne Laga Helay Sabtidii shalay Cudurka Covid19